Alfawise M1 လျှပ်စစ် Scooter (25km / ဇ, 30km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး), ၏စျေးနှုန်း ...
အစ » ထုတ်ကုန်များ » လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ » လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်, Scooter » Alfawise M1 လျှပ်စစ် Scooter (25km / ဇ, 30km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
အစလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်, ScooterAlfawise M1 လျှပ်စစ် Scooter (25km / ဇ, 30km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
Alfawise M1 လျှပ်စစ် Scooter (25km / ဇ, 30km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ဇွန်လ 2019 20 6: 02
စျေးနှုန်းသမိုင်းမူရင်း Alfawise M1 ခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ
€ 294,45 - 2019 20 ဇွန်လ
€ 303,37 - 2019 15 ဇွန်လ
€ 294,45 - 2019 12 ဇွန်လ
€ 321,22 - 20197ဇွန်လ
€ 294,45 - 20195ဇွန်လ
€ 312,30 - 20194ဇွန်လ
€ 330,14 - 2019 မေလ 28
€ 312,30 - 2019 မေလ 26
မှ: နိုဝင်ဘာလ 2018 7
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 481,11 - 2018 21 နိုဝင်ဘာလ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 276,60 - 2018 10 နိုဝင်ဘာလ
မူရင်း Alfawise M1 ခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ
●6ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာ: Short-circuit ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, Over-လက်ရှိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, overcharge ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, Over-ဥတုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အနိမ့်ဗို့အားကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အပူချိန် Anomaly ကာကွယ်မှု
● 250 rated ပါဝါ (500 max ကိုပါဝါ) မော်တာ 25 ဒီဂရီ gradient ကိုအတူ max ကို 14km / ဇမြန်နှုန်းကိုထောက်ပံ့ပေး
max ကို 5.2km မိုင်အကွာအဝေးများအတွက် (ထုတ်ကုန်များတွင်ပါဝင်သည်) ● 280Ah / 30Wh တင်သွင်း Li-ion ဘက်ထရီ
●8.5 လက်မအစိုင်အခဲဆွန်းရော်ဘာတာယာ များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောခိုင်ခိုင်လုံလုံ
● ခေါက်ဒီဇိုင်း (ခေါက်အရွယ်အစား: 108 43 က x x ကို 49cm) အဆင်ပြေထမ်းများအတွက်
လုံခြုံစွာညအချိန်တွင်စီး● LED ရှေ့အလင်း
max ကို 100kg payload များအတွက်●လူမီနီယမ်အလွိုင်း shell ကို
● Input အားဗို့: 100 - 240V
- တပ်ဦး: E-ကို ABS Anti-သော့ခတ်ဘရိတ်စနစ်က
- နောက်: စက်မှု disc ကိုဘရိတ်
for: လူကြီးများ, ရုံးအလုပ်သမားများ, ဆယ်ကျော်သက်
charger အမျိုးအစား: အီးယူ plug ကို
ဘီးအရေအတွက်:2ဘီး
ဘက်ထရီ: Li-ion ဘက်ထရီ
မိုင်အကွာအဝေး (လမ်းနှင့်ယာဉ်မောင်းအလေးချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်): အထက် 20km
အများဆုံးမြန်နှုန်း: 25km / h
မက်စ် payload: 100kg
အလင်း: တပ်ဦးမီးအိမ်, ဘေးထွက်မီးအိမ်, အမြီးအလင်း
မော်တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော Power: 250W
input ဗို့အား: AC အ 100-240V
5 နာရီ: အချိန်အားသွင်း
တုရုမြို့အချင်း: 8.5 လက်မ
နင်းမြေပြင်ရှင်းလင်းခြင်း (အဘယ်သူမျှမအလေးချိန်ဆောင်သော): 8.7cm
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -10 - 40 Deg.C
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်: 12.5000 ကီလိုဂရမ်
package အလေးချိန်: 17.5000 ကီလိုဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 108.00 x ကို 43.00 x ကို 114.00 စင်တီမီတာ / 42.52 x ကို 16.93 x ကို 44.88 လက်မ
package အရွယ်အစား: 115.00 x ကို 55.00 x ကို 20.00 စင်တီမီတာ / 45.28 x ကို 21.65 x ကို 7.87 လက်မ
package အကြောင်းအရာ: 1, လျှပ်စစ်စကူတာ x 1 x ကိုအားသွင်းကိရိယာ, 1 အင်္ဂလိပ်လက်စွဲစာအုပ် x, 1 hex Tool ကို,4ဝက်အူ x x
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Alfawise M1 လျှပ်စစ် Scooter (25km / ဇ, 30km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
မက်စ် payload (ကီလိုဂရမ်)
X ကိုက x 108.00 48.00 114.00 စင်တီမီတာ x ကို 42.52 18.9 44.88 လက်မ x ကို
X ကိုက x 110.00 51.00 18.00 စင်တီမီတာ x ကို 43.31 20.08 7.09 လက်မ x ကို
လျှပ်စစ်စကူတာ 1, 1, 1 က x Tool ကိုအင်္ဂလိပ်လက်စွဲစာအုပ် x x, 1 အားသွင်းကိရိယာ x
€ 329,99 - 2019 20 ဇွန်လ
€ 339,99 - 2019 15 ဇွန်လ
€ 329,99 - 2019 12 ဇွန်လ
€ 359,99 - 20197ဇွန်လ
€ 329,99 - 20195ဇွန်လ
€ 349,99 - 20194ဇွန်လ
€ 369,99 - 2019 မေလ 28
€ 349,99 - 2019 မေလ 26
အဘို့အ3ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Alfawise M1 လျှပ်စစ် Scooter (25km / ဇ, 30km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
အက်ဒွပ် Ivan - ဇွန်လ 2019 10
ငါမှောင်မိုက်၌နှင့်နွေရာသီနေ့ခင်းဘက်နေစဉ်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံးယခု Scooter အကြိမ်အနည်းငယ်စီးပါတယ်။ ရှေ့ပေါ်အလင်းကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်တယ်ကစက်ဘီးလမ်းသွားအတွက်စီးနင်းတဲ့အခါမှာမြင်နိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့တောက်ပပါပဲ။ ဒီ Scooter စီးနှစ်ဦးစလုံးအားလပ်ဘို့သည်ကြီးနှင့်ယေဘုယျ commuting.Riding ကောင်းသောဖြစ်ပါသည်, တာယာလမ်းထဲမှာကျောက်ဆောင်နှင့်အသေးစားဒါကိုတော့ကျော်စီမံကိုင်တွယ်ရန်လုံလောက်သောလွယ်ကူပါတယ်ဒါကtokiųအလုံအလောက်ကြီးမားသောဖြစ်ကြသည်။ လမ်းtačiauအတွက်ကြီးမားတဲ့အက်ကွဲသို့မဟုတ်အပေါက်လည်းမရှိဆိုပါကငါကကျော်ဒီစီးနင်းအန္တာရာယ်မဟုတ်ဘူး။ သငျသညျရှေးခယျြဖို့အတှကျနှစျခုမြန်နှုန်းဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါဘက်ထရီသက်တမ်း, ရုံးပြန်အိမ်ပြန်ဖို့ကျွန်မကိုသယ်ဆောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းထက်အံ့သြဖွယ်ပါ! ဒီထက်အချိန်ယခုခရီးသည်အပေါ်ခဲ့ရသည်။ တစ်နိမ့် price.I ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလျှပ်စစ် Scooter ဝယ်ယူရန်ရှာဖွေနေသူများသည်အဘို့ဤထုတ်ကုန်အကြံပြုမှာ Xiaomi က M365 နှင့်နှိုင်းယှဉ် M1, တူညီတဲ့အရည်အသွေး, whereis သည်။
ရှောလမုန်သည် - ဇွန်လ 2019 10
အစဉ်အမြဲငါပထမဦးဆုံး Xiaomi က M365 လျှပ်စစ်စကူတာနှင့်အတူတဦးတည်းစီးနင်းပြီးကတည်းကယခုလအတွက်ဆိုင်ကယ် browsing နှင့်သုတေသနပြုခဲ့ကြရတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးကိုစီးသည် Xiaomi ကငါ့အဘတ်ဂျက်လည်းလျှပ်စစ် Scooter ငါ့ကိုအများကြီးအံ့အားသင့် limited.This ဖြစ်ပါတယ်tačiauတစ်စူပါချောမွေ့စီးဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစားဘီးနှင့်ထိတ်လန့်စုပ်ယူရှိပါတယ်! ဒါဟာငါလျှပ်စစ် Scooter အတွက်လိုချင်အရာအားလုံးရှိပါတယ်, နှင့်စျေးနှုန်းမဟုတ်ဘဲအနိမ့်ပါ! Rhodes အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်အလွန်ကြီးစွာသောတွေ့ရှိခဲ့! ဒါဟာကိုယ့်ဖမ်းပြီးနှင့်ညဉ့်အချိန်၌ကမ်းခြေတစ်ဦးအမြန်ခရီးစဉ်တက်, ဒါမှမဟုတ်တချို့ကော်ဖီဒါမှမဟုတ်ဘာဂါတစ်ပြေးသွားနိုင်တယ်လို့အဲဒီတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါ့ကို great.The ခေါက်ယန္တရားအားကြီးသော, ကောင်းစွာဒီဇိုင်းကုန်းပတ်နှင့်အတူကိုလည်းသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်ခံစားရတယ်အောင်, လမ်းခရီး၌ချောချောမွေ့မွေ့လာပြီ။ ငါတည်ဆောက်ရညျအသှေးအားဖြင့်လုံးဝသဘောကျမိပါတယ်။ အဆိုပါလူမီနီယံအလွိုင်းဘောင်ထူးခြားသောနှင့်ကြံ့ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြေးဇူး - ဇွန်လ 2019 10
မကြာသေးမီကငါ Xiaomi ကထုတ်ကုန်ဝယ်ယူထက်ပို Alfawise ထုတ်ကုန်တွေအများကြီးတန်ဖိုးရှိတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်! ငါ့လစာ, ငါ့အကောင့်သို့ပြောင်းရွှေ့နေသည်ထိုခဏခြင်းတွင်အပြီးဒီတစ်ခုဝယ်ပါတယ်။ တကယ်ပဲကြောက်မက်ဘွယ်! ထိုသို့ငါ့မိတ်ဆွေရဲ့ Xiaomi ကလျှပ်စစ်စကူတာအဖြစ်နီးပါးတူညီစွမ်းဆောင်ရည်ပေးထားပါတယ်။
Xiaomi က Mi EUNIS ES808 လျှပ်စစ် Scooter (25km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
Rcharlance S8 လျှပ်စစ် Scooter (25km / ဇ, 25km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
H-8501 လျှပ်စစ် Scooter (25km / ဇ, 30km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး) €281,65
Zhiyi ZW-B02 ကြိုးမဲ့ stabilizer ထိန်းချုပ်မှု €38,99